Chhalphal News - विचार
​पाखुराको पौरख र गाउँको गौरब नाप्ने मानक दशैंमा हालिनी पिङ्गले निर्धारण गर्थ्यो । पारी देउरालीमा दशैं अगावै चरर कि चरर सुनिन्थ्यो । अर्चलबोट भन्ज्याङ्गमा हर साल पिङ्ग हाल्न छुटाउदैनथे । तर, हाम्रो कालिका थानको डाडोमा गाडिएका दुइटा पिङ्गका खामामा धमिराले बाल्मिकी उठाएको देखिदा अन्यत्र हाम्रो लोतेपनको खिसीट्युरी हुनु स्वाभाविक नै थियो । हाम्रो रोटे पिङ्गका धेरै जस्तो 'ठिनीमिनी' भाच्चीएका र हराएका हुनाले हामी प्राय: गाउँको पुछारमा रहेको सार्की चौतारोको ठुलो...
​​आमाले गोरुको गोबर फुस्रो माटोमा मुछेर पिढीभित्ताका चरहरु ल्याप्पै टालेसी घरले पहिलो संचार पाएछ क्यारे सफा पो देखिन थाल्यो । अघिल्लो दिनदेखि पकाउन थालिएको ताउला भरिको झोल सुकेर दुई माना जति बसेको खोटो खवाटामा राखेर हजुर्माले काठमा दल्न के सिकाउनु भाथ्यो मैले आखिझ्याल पुरै रङ्गयाई हाले नि । पिढीका खामामा के दल्नु थियो र ! धाइरा काठ...कर्मीले रन्द लाको भए...
​​निश्चित पद्दतिबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा विभिन्न छनोट चरण पार गरेर आएका गैर राजनीतिक चरित्रका कर्मचारीको समूह वा संगठन नै निजामती सेवा हो । निजामती सेवा मुख्यतः गैर सैनिक चरित्रको हुन्छ र राज्यको कानुनमा आधारित रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छ । निश्चित अनुशासन र आचरणहरूका विषयहरू पालना गरी मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्ने राज्यको मूल स्थायी संयन्त्रको रूपमा निजामती सेवाले कार्यसम्पादन गर्छ ।...
​​जताजतै विष मात्र छ । हामी विष पिएर अमृत ओकल्न कहाँ सक्छौं र ? नेपाली राजनितीको चरित्र विषाक्त छ । यो विष मार्न कुनै अमृत काफि छैन । आशा एउटा मात्र छ, बिस्तारै विष उडेर जाला । आन्दोलन भए, गरियो । आन्दोलित मनहरूले चाहेको त्यो आमूल परिवर्तनको नदी हामि बिचबाट कहिल्यै बगेन । बग्ला कि भन्ने आशा र बगिदियोस भन्ने...
​​१८ वर्ष भएछ, अङ्ग्रेजी क्यालेण्डरको अगष्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउन थालेको । सन् २००४ देखि नेपालमा पनि युवा दिवसको बतास चलिरहेको छ । यतिका यामसम्म युवा दिवस प्रभात फेरी, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रियामा मात्रै सीमित रहेको छ । युवाका कार्यक्रममा पाका उमेरका मानिसहरूको सघन उपस्थिति देखिने गरेको छ । यो परिदृश्यले के नेपालमा युवाहरू छैनन् ? भन्ने...
​​समयको अन्तरालमा गुरु गुडँ हुन्छ र चेलो चिनी बन्छ । दुवैको विशेषता गुलियो हुन्छ । अहिलेको जिन्स जेनेरेसन र साइवर पुस्ताले ह्याप्पी वर्थडे त सेलिब्रेट गर्छन् तर गुरुलाई सम्मान गर्न खासै रुचि र चासो देखाउँदैनन् । अझ निजी विद्यालयको शिक्षामा हुर्केकाहरूले त पैसा तिरेर पढेको हो किन गुरुभक्ति देखाइरहनु पर्यो भन्ने मान्यताको जगमा उभिएका छन् । केही पहिला गुरुको सम्मानमा...
डियर फिष्टेल ! तिमी भर्जिन नै रहनु....
​​हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ्को थाक टुकुचेमा जन्मे हुर्केका, ‘जातिले थकाली भाषाले नेपाली’ कवि भूपी शेरचनले विक्रमाब्द २०२२ सालमा ‘पोखरा’ शीर्षकको कविता लेखेका थिए । जसलाई जतनले ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ (वि.सं. २०२६) कवितासङ्ग्रहमा सञ्चयन गरिएको छ । कविताको तेस्रो स्टेन्जा गज्जबको छ । कल्पना गर्नुहोस् त प्रिय पाठक ! एउटा तस्विर देखिन्छ । माछापुच्छ्रे ...
गुडमर्निङ गणेश सर......!
​​काठमाडौंका गणेशमानको नाम रेडियोबाट सुनेर र पत्रिकामा फोटो देखेर चिनेको थिएँ । पोखराका गणेशमान पालिखेलाई एकतर्फी चिनेको ४० को उत्तरार्धतिरबाट हो । यद्यपि पहिलो भेटघाट र सम्वाद मनसुनका बेला आफन्ती विद्यार्थीलाई भनसुन गर्न जाँदा भएको थियो । बिक्रमाब्द २०५१ सालको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पछि साउने झरिका बेला छाता ओडेर गणेश सरलाई भेटन जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस गएको थिएँ । ...